काठमाडौँ २७ असोज । नाकाबन्दीको कारण ग्यास अभाव भएर चुलो बल्न छाडेपछि काठमाण्डु, ताहाचलका अमृत भुजेलले २७ बर्षअघि आफुले काम गरेको परियोजना सम्झिए । मोरङ बाहुनी राधानगरमा तेल अन्वेषण कम्पनीको परियोजनामा उनले २०४५ सालमा काम गरेका थिए । ‘त्यो परियोजना अधुरै रह्यो, नेपालले चाहेको भए यतिका बर्षमा त देशमै निकाल्न…
मधेसी मोर्चाले आन्दोलन नरोक्ने, दशैं पनि नमान्ने
काठमाडौ, २६ असोज । संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेसमा जारी असहयोग आन्दोलनलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । नजिकिदै गएको दशै, तिहार र छठ त्यस्तै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागि भएका कारण सुरु भएको आलोचनाका कारण केही समय आन्दोलन स्थागित गर्ने तयारी भईरहेको मोर्चाकै नेताहरुले बताईरहेको बेला त्यस्तो निर्णय आएको हो । मोर्चाले…
पोखरा २५ असोज । भारतिय हस्तक्षेप विरुद्ध पोखरामा विरोध ¥याली निस्केको छ । युनाइटेड क्लवको आब्हान तथा पोखरामा क्रियाशील विभिन्न क्लवहरुको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौ, राष्ट्रिय सवालमा एक हौ भन्ने मुल नाराका साथ पोखरा सभागृहबाट निस्केको ¥यालीले बिभिन्न बजार परिक्रमा गरेको थियो । बजार परिक्रमा पछि पोखराको बिपीचोकमा…
असोज २५ | नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इन्धन अभाव केही दिनमै समाधान हुने बताएका छन्। आन्दोलनरत दलहरू प्रक्रियामा आइसकेको र बाँकी समस्यालाई तत्काल समाधान गरिने उनले बताए। सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण लगत्तै बोल्दै ओलीले केही दिनमै मुलुकमा व्याप्त इन्धन अभावको समस्या समाधान हुने बताएका हुन्। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नयाँ…
काठमाडौं, असोज २५ / प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इन्धन अभाव केही दिनमै समाधान हुने बताएका छन्। आन्दोलनरत दलहरू प्रक्रियामा आइसकेको र बाँकी समस्यालाई तत्काल समाधान गरिने उनले बताए। सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण लगत्तै बोल्दै ओलीले केही दिनमै मुलुकमा व्याप्त इन्धन अभावको समस्या समाधान हुने बताएका हुन्। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नयाँ ढंगले…
२५ असोज, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै अन्य दिनको तुलनामा धेरै तेल ट्यांकरहरु नेपाल भित्रिएपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दी खुकुलो भएको धेरैले अनुमान लगाए । तर, सोमबार भने नाकामा कडाइ पहिलेको जस्तै देखिएको छ । सीमानाकामा खासै नयाँ दृश्य देख्न नपाइएको नेपाली भन्सार अधिकारीहरुले बताएका छन्…
३८ औ प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले जनताको नाममा सपथ लिए, मन्त्रिमण्डल आठ सदस्यीय
काठमाडौ, २५ असोज । मुलुकको ३८ औ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज सपथ लिएका छन । राष्ट्रपति कार्यालय शिलत निवास परिषरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदको लागि सपथ ग्रहण गराएका थिए । ओलीले सपथको भाषामा रहेको ईश्वरको नाममा भन्ने शब्दको सट्टा…
असोज २५,काठमाडौं| एक महिनाभित्र शीतल निवास छाडनुपर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई चाहिने सुविधाबारे राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ । ‘पद–निवृत्त राष्ट्रपतिका लागि सुविधा प्रबन्धबारे’ शीर्षकमा मुख्यसचिवलाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतबाट रातोपाटीलाई प्राप्त उक्त प्रस्तावमा निवृत्तभरणको सामान्य सिद्धान्तअनुसार तलबको कम्तीमा आधा…
२४ असोज, काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको आइतबार बसेको बैठकले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र रचनात्मक कामलाई…
घर नजिक पार्किङ गरेको गाडीमा अागजनी